Archive du 20181115
Fifidianana filoha Manana ny ambarany koa ny iraisam-pirenena
Mifantoka amin’ny voka-pifidianana sy ireo karazana tsy fahatomombanana maro samihafa manodidina izany ny adihevitry ny olom-pirenena etsy sy eroa tato anatin’ny herinandro izao.
Voafatotry ny fisorohana ny rotaka politika ny fampiharan-dalàna eto Madagasikara, raha jerena amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.
Komitin’ny fampihavanana malagasy Nivoaka tamin’ny fahanginany
Manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny dia nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny avy eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana malagasy na CFM.
Trano famokarana horonantsary “Metatron Production” Mahitsy Hamoaka tsy ho ela ny “Tsio-drivotra »
Eo am-pamaranana ny fanodinana ny sarimihetsika novokariny voalohany ny Metatron Production eny Mahitsy amin’izao fotoana.
TALE JENERALIN’NY CONFORAMA
Nisy naka an-keriny omaly i Nassir Navjee, tale jeneralin'ny Conforma
Fanampiana ireo zaza sahirana sahanin’ny Ong Manda Hikarakara fampisehoana hiarahana amin’i DO B ny Airtel
Betsaka ireo ankizy sahirana tsy manam-piahy eto an-drenivohitra. Anisan’ireny ireo mpatory an-dalana izay sady tsy afaka miditra any an-tsekoly no tsy misy mpiahy ihany koa.